Ciidanka dowladda iyo Al-shabab oo xalay ku dagaallamay Muqdisho – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidanka dowladda iyo Al-shabab oo xalay ku dagaallamay Muqdisho
Ciidanka dowladda iyo Al-shabab oo xalay ku dagaallamay Muqdisho
March 12, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Ugu yaraan hal Askari oo ka tirsan Ciidamada dowladda ayaa ku geeriyooday iyada oo ay tiro kale ku dhaawacmeen kaddib dagaal dhexaray Ciidamada dowladda iyo Al-shabaab.
Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab ayaa xalay ku dagaallamaya degmada Kaxda ee Magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa daba socday kaddib markii shalay gelinkii dambe Al-shabaab ay dileen Askari ka mid ah Ciidamada dowladda oo waardiye ka hayay xero barakaca oo ku taalla degmada Kaxda.
Kooxda dilka geystay ayaa qaatay Qoriga Askariga iyada oo kaddibna xalay Ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen xaafad ka mid ah Degmada Kaxda oo la sheegayo in Habeenkii ay soo galaan Al-shabaab.
Dagaalka ayaa ka dhacay Xaafadda Qubuuraha Boqolka Boos ee Degmada Kaxda,iyada oo uu halkaasi ka dhashay khasaare kala gaaray labada dhinac
Al-shabaab lama oga khasaaraha ka gaaray dagaalka xalay ka dhacay Degmada Kaxda,kamana aysan hadal sidoo kale ciidamada dowladda ayaan ka hadlin weerarkii xalay.
Askariga ku dhintay weerarkaas ayaa magaciisa lagu soo gaabiyay Alxan,waxaana uu ka mid ahaa Ciidamada dowladda ee weerarka ku qaaday Al-shabaab.
Wasiirka Istaarsiinta Somaliland oo Deegaaanada maamulkaas ka mamnuucday isticmaalka Astaanta Internerka Soomaaliya.
Daawo Sawirro: Wasiir Ka Tirsan Puntland Oo Ka Bad Baaday Shil Gaari
48,079 total views, 61 views today
48,079 total views, 61 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,151 total views, 61 views today
48,151 total views, 61 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,161 total views, 61 views today
48,161 total views, 61 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,183 total views, 61 views today
48,183 total views, 61 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,218 total views, 61 views today
48,218 total views, 61 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]